Masaajid lagu weeraray qamri iyo kondom | Somaliska
Masaajid ku yaala degmada Eslöv ee ka tirsan gobolka Skåne ayaa haboon hore loo geystay weerar foolxumo badan. Saqdii dhexe ayaa daaqaha masaajidka la qarbuday iyadoo gudaha masaajidka lagu soo tuuray dhalooyin qamri ah isla markaana daaqadaha lagu dhajiyay kondomyo la isticmaalay.
“Waxay gudaha ku soo tuureen dhalooyin qamri ah oo ku burburay roogga, waxay kale oo daaqadaha ku dhajiyeen kondomyo. Waa arin aad looga xumaado, weerarada islaam naceybka ah aad ayay u soo badanayaan” ayuu yiri Samir Muric oo imam ka ah masaajidka.
Sababta masaajidka loogu weeraray qamriga iyo kondomka ayaa muujinaysa in ay tahay in laga caraysiiyo muslimiinta. Ma ahan markii ugu horeysay ee weeraro nuucan ah loo geysto masaajida Sweden, iyadoo horay masaajida qaarkood lagu weeraray madax doofaar.
Waxaa xusid mudin in degmada Eslöv ay ka midtahay goobaha ay taageerada weyn ka heleen xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) doorashadii sanadkaan.
walaal mcn wax I fahamsii
wa arrin folxun balse dawladda halooga dacwoodo oo haleeska ilaaliyo wax gacan ka Hadal ah
xadki ayey soo dhaafeen markaan wax ka hadlaayo male miya dowlada wey maqleysa in weerar jogto ah lagu haayo masaajidyada mase xanuun kuma heyso sababta an looga hadleynin ma fahmin
Khaled hashi says:
Asc Jimale sxb wanku dalnay siyasad waxan ubaha nahay shekoyinka tariikh qaha Iyo arimaha bulshada mahad sanid